Ciidamada Somaliland oo xalay Laascaano kutoogtay nin kamid ahaa shacabka Magaalada (Magaca ninka iyo…). – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaCiidamada Somaliland oo xalay Laascaano kutoogtay nin kamid ahaa shacabka Magaalada (Magaca ninka iyo…).
Ciidamada Booliska ee maamulka Somaliland ayaa habeenkii xalay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Dool ku dilay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxman Cumar Faarax ( Soomadow), kaasi oo ka mid ahaa shacabka magaalada.
Ciidamada ayaa xilliga dilka ay geysaneen waxay wadeen hawl-gal ay ku soo qabqabanayaan dadka sita hubka gaarka loo leeyahay ah ee magaalada lagu dhex haysto.
Weli laamaha ammaanku kama hadal sababta Boolisku u dileen ninkan. Lasoco faah faahinta
Faahfaahin dheeraad filo
Maxkamadda sare ee Puntland oo maanta goaan ka gaaraysa eedeysanayaashii tacadiga kudilay Caaisha Ilyaas “Xarunta gobolka maxaa kasocda”.